शंका र भयको गोल चक्करमा चलचित्र क्षेत्र, पुरानै लयमा फर्किन्छ कि फर्किँदैन ? | Ratopati
personरासस exploreकाठमाडौं access_timeसाउन ११, २०७८ chat_bubble_outline0
नेपाल चलचित्र सङ्घका अनुसार तीन करोड लगानी फसाएर बसिरहेको ‘प्रेमगीत ३’ जस्ता ठूला चलचित्रको हैरानीको कथा कोभिडको कहरभन्दा तीतो छ । “सामाजिक दूरी कायम गरेर हल सञ्चालन हुन सक्छ कि सक्दैन ? त्यो दोस्रो कुरा हो । पहिलो कुरा त हलसम्म दर्शक आउँछन् की आउँदैनन् र चुनौतीमा चलचित्र प्रदर्शन गर्न निर्माता तयार हुन्छन् की हुँदैन भन्ने नै हो”, चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधानले भने ।
नेपालमा मात्र हैन नेपाली चलचित्रको विदेशी बजार पनि शून्य अवस्थामा झरेको छ । नेपाली चलचित्रका लागि आकर्षक आम्दानीको अर्को स्रोत हो डायस्पोरा । कोभिडको दोस्रो र तेस्रो लहर पुनः शुरु भएसँगै विदेश बजार (डायस्पोरा) को सम्भाव्यता झन्झन् खुम्चिँदै गएको छ ।